Hatramin’ny alahady izao: ho betsaka na ho tena betsaka ny rotsak’orana | NewsMada
Hatramin’ny alahady izao: ho betsaka na ho tena betsaka ny rotsak’orana
Ho betsaka na ho tena betsaka ny rotsakorana150 hatramin’ny 400 mm ny herinandro voalohany izany hoe ny 21 hatramin’ny 27 Janoary.
Amin’ity herinandro ity, 21 hatramin’ny 27 janoary 2019, ho ambony ny tahan’ny mety hiforonan’ny rivodoza ary tokony arahi-maso akaiky ny fivoaran’izany satria akoatra ny fisian’i Desmond dia mety hisy rivodoza hafa hiforona ao atsimon’ny lakandranon’i Mozambika. Ny herinandro ho avy 28 janoary hatramin’ny 03 febroary, hiverina ambany ny tahan’ny mety hiforonan’ny rivodoza eto Madagasikara na dia eo aza ny tombana mety hisian’ny fiforonan’izany indray ao amin’ny ranomasim-be Indiana.
Vinavinaina hivadika ho rivodoza, anio, ilay tangoron-drahona niainga avy any amin’ny tapany avaratry ny Nosy ary nivoaka eny an-dranomasina, omaly, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny Sampana mpamanantatra ny toetry ny andro, Randrianarison Rivo, omaly teny Ampandrianomby. Haingana be ny fiforonan’ny rivodoza ao amin’ny lakandranon’i Mozambika ka nahazo filazana fanairana sahady ny faritra Anosy ary Atsimo Andrefana ho fiomanana sahady. Omaly maraina, tany amin’ny 200 km amin’ny morontsirak’i Maintirirano no nisy azy. Ho betsaka hatrany ny rotsakorana ao avaratra-andrefana sy atsimo-atsinanana, noho izany, voatazona ny filazana miloko mavo amin’ny habetsahan’ny rotsakorana ao amin’ny faritra Boeny, Melaky ary Menabe. Toy izany koa ny ao Atsimo Atsinanana izay nofaritana ho faritra mena, omaly noho ny hamafin’ny oram-baratra. Foana kosa ny filazana loza ho an’i Diana sy Sofia sy Analamanga, nanomboka omaly hatramin’ny anio. Entanina ny mponina hitandrina amin’ny mety ho fihotsahan’ny tany sy ny fiakaran’ny rano. Tsy azo atao intsony koa ny miandriaka amin’ny morontsirak’i Madagasikara iray manontolo fa ho mafy ny fitsokan’ny rivotra.
Eto Antananarivo, hitohy ny orana fa ny asabotsy no ho betsaka ny fiaviny. Efa levona kosa ilay rivodoza Desmond rehefa niditra tany Mozambika.
Mahery ny rivotra
Nahazo filazana loza mitatao ny morontsiraka rehetra manodidina an’i Madagasikara. Filazana miloko mena manambara fa mafy ny rivotra ary mila atsahatra ny asa an-dranomasina rehetra. Hahery vaika ny onjan-dranomasina vokatr’izsany rivotra mahery entin’ilay rivodoza sy ny faritra andro ratsy izany.